Regulation nke kaadị Market na 2018 - Blockchain News
Ọkachamara kweere na na 2018, anyị pụrụ ịtụ anya na ndị ọchịchị ga-amụba na-achịkwa ICO ahịa, cryptocurrency mgbanwe, na-azụ ahịa. N'otu oge ahụ, isi Central bịara n'ikperé mmiri nke ụwa ịghọta cryptocurrency nwere-akpan akpan, Bitcoin-ma dị njikere ịzụta ya n'afọ ọzọ. Anyị atụleela ihe ntụziaka obibia nke dị iche iche ego ozu n'ebe kaadị ahịa ga ịzụlite na 2018.
Nke a afọ ego ọchịchị na ọtụtụ mba ẹkenam ICO ụkpụrụ na kwuru na ha na-ele otú a nke-adọta ego. Ya mere, China na South Korea eze amachiele ICO ẹkenịmde ke n'ókèala ha. Na ntụle, na USA, Canada, Switzerland, Japan, Singapore, na U.A.E. nyere ọtụtụ mkpebi ndị na-ekwe ICO eze, na ICO a doro gbasara ego obodo ọchịchị iwu. Agbala tokens nwere ike ịda n'okpuru ẹdude iwu, ọmụmaatụ, onye inye iwu interfund azụmahịa. Dị ka Jerry Brito, Executive Director nke nonprofit nzukọ Mkpụrụ ego-Center, ọchịchị ga-eso US atụ ma na-amụba na-achịkwa iriba ahịa na 2018. Na USA, ụfọdụ kpọmkwem tokens na ICO na-atụle ala na usoro n'okpuru mkpa iwu. Stephen Obie, a na onye òtù ọlụlụ na mba iwu siri ike Jones Day, na-egosipụta a yiri echiche:
“M na-eche na-ọzọ doro anya ga-abịa site na ndị mmanye omume na ndị ọzọ na nduzi na sec ga-enye ndị tokenized n'ọma ahịa. The regulator maara banyere nke a ahịa na-ewe ya kpọrọ ihe.”
Ọkachamara kweere na omume yiri ICO ga-weere na nkwanye ùgwù nke cryptocurrency, ọ kachasị, bitcoin. dmitriy Zhulin, ngalaba-nchoputa nke ins ilekota, bi n'elu nke a nke:
“Ka Bitcoin booms, ụkpụrụ ga-akpa na-ede ICOs wee ibugharịa na cryptocurrencies, Otú ọ dị, ọ bụ ike ugbu a ịkọ ma ọ bụrụ na a ga-enwe a ebughi pụta maka ụlọ ọrụ. N'agbanyeghị na-abawanye na ụkpụrụ na kaadị ohere, M kwere na blockchain ka a technology na-agaghị egbochi arọ iwu.”
Bitcoin azụmahịa na-ama iwu na mba, dị ka Bolivia, Ecuador, India, Bangladesh, Iceland, Kyrgyzstan, Morocco, Nepal, Malaysia, Indonesia, na Taiwan. N'otu oge ahụ, China, ebe ọ na-machibidoro ahia na obodo cryptocurrency mgbanwe, na Russia na-akwadebe ego nke cryptocurrency iwu, nke nwere ike na-abata ike na 2018. Na United States, bitcoin investors ga-akọ uru na-ahụ Maka Ụtụ Service (IRS) na-akwụ ụtụ isi dị ka Rịba 2014-21.
on December 4, na UK na EU ego regulators kwuru banyere na-eme atụmatụ na-agafe na iwu n'okpuru nke cryptocurrency ahịa na investors, na ụfọdụ, a ga-achọ ka igosipụta na ha onwe onye ozi, na cryptocurrency mgbanwe ga-enye ndị ọchịchị na ohere ọrụ ozi. Dị ka obodo ego ozu, a jikoro dị mkpa iji gbochie ego-Laundering ọrụ na iyi ọha egwu ego. Harmonization nke dị iche iche na-eru nso n'ebe a nke ga-agwụ agwụ n'oge 2018, na iwu ga-abịa n'ime ike site na njedebe nke na-esote afọ.
G7 Central anoghi n'ulo oba na cryptocurrency
Ọ bụla ihe ịrịba ama na-egosi na mkwado nke kaadị ahịa iwu site ego ọchịchị na mba dị iche iche. regulators, Otú ọ dị, -ahụ nwere na cryptocurrency nakwa. na 2018, G7 Central anoghi n'ulo oba ga-amalite ịzụ cryptocurrencies akwado ala ọzọ ha mee. A mgbanwe G7 Central anoghi n'ulo oba ga-abụ mgbe ndị bitcoin ahịa capitalization karịa uru nke niile SDR (pụrụ iche ịbịaru ikike). Ọ bụ ihe na mba idobere akpan owo kere site International Monetary Fund (IMF) ka ịgbakwunye ya so mba’ ukara mee. Bitcoin capitalization, ọmụmaatụ, esesịn karịrị uru nke SDR (dị $291 ijeri).
Ọzọ Inye ego mmiri oyi mgbe ga-aghọta na ụkpụrụ omume nke G7 ego na-devaluing megide cryptocurrencies. na 2018, anyị ga na-agba àmà bitcoin na ndị ọzọ na cryptocurrencies aghọ kasị dị ịrịba ama na mba ego site ahịa capitalization, dị ka ndị ọkachamara.
National digital ego
Site na-eke mba digital ego, ọtụtụ mba na-ọbụna na-eme atụmatụ iji sụgharịa ha na mba ego na blockchain. Jim Angleton, President of Aegis FinServ Corp, bụ n'aka na ọtụtụ mba ndị dị otú ahụ ego ga na-eto eto:
“Anyị maara na n'oge 108 mba na-na na na-esite digital ego na ihu ọma nke na-ewepụ ha akwụkwọ ego na exiting na nduzi n'elu U $ D. Anyị kwenyere 20+ Mba ga-amalite Beta Testing kwupụta ihe mgbaru ọsọ ha.”
ikpeazụ October, anyị wee mara na Russia ga-enweta ya na mba digital ego, cryptoruble. The ọchịchị ga-achị issuance na ikesa cryptoruble na Russia, na cryptocurrency Ngwuputa aghọ agaghị ekwe omume. Ọzọkwa, Venezuelan President Nicolas Maduro nyere ntụziaka, dị ka nke na igba egbe nke mba cryptocurrency El Petro na-zubere na-esote afọ. Venezuelan eke akụ ebuka, dị ka gold, mmanụ, na diamonds, ga-akwado El Petro.
The ICO na kaadị trading na eze iwu na China, ma, ọ bụ nke mbụ mba na-anwale dijitalụ prototype nke mba ego. Yao Qian, isi nke Digital Ego Research Department na Ndị mmadụ Bank of China, kwuru na ego regulator ga inye mba cryptocurrency nke ga-eje ozi dị ka a iwu nro dị ka anya dị ka o kwere.
Na December Central bịara n'ikperé mmiri nke United Arab Emirates na Saudi Arabia ulo oru a pilot igba maka cross-ókè-ala ịkwụ ụgwọ. Ntunye aka nke Saudi Arabia si akụ etiti bụ ọwọrọiso, nyere na tupu e nweghị ukara kwuru banyere cryptocurrency, kaadị ahịa, ma ọ bụ blockchain site mba ego regulators. The U.A.E., ya n'aka, na-emepe emepe a ọnụ ọgụgụ nke blockchain oru na onwe na ọha mpaghara, na Global Blockchain Council of Dubai bụ na-elekọta ọtụtụ n'ime ha.
Regulation nke kaadị Market